Ha jebin sharciga markaad u safrayso Thailand: Waxaad ku dambayn kartaa dhimasho
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Ha jebin sharciga markaad u safrayso Thailand: Waxaad ku dambayn kartaa dhimasho
Jebinta Wararka Caalamka • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Qofka la tuhunsan yahay ayaa la arkay isaga oo madaxiisa ku duuban bac ka hor intaan la dilin.
U safridda waddan kale waxay noqon kartaa khatar haddii aad jebiso sharciga, ha noqoto mid loola jeedo ama si kama 'ah iyadoo ay ugu wacan tahay inaadan ogeyn. Thailand gudaheeda, in la xiro waxay la macno tahay in qofka laga shakisan yahay uu ku dambayn karo dil ama uu iska baaba'o.
Thaialnd waxaa ka jira qaylo -dhaan dadweyne oo ku aaddan dib -u -habeyn lagu mamnuucayo jirdilka iyo la la'yahay tuhmanayaasha.
Laba sharci oo qabyo ah ayaa la soo saaray sanadihii la soo dhaafay oo hadda la sugayo in lagu daro ajendaha Baarlamaanka.
Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu bilaabay isbaddallo lagu sameynayo ururka booliska isagoo dib u eegay Xeerka Booliska.
Afhayeenka Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Thanakorn Wangboonkongchana ayaa tilmaamay in Ra'iisul Wasaare Gen Prayut Chan-o-cha uu garwaaqsaday walaaca dadweynaha ee kiiska Agaasimihii hore ee Saldhigga Booliska Nakhon Sawan wuxuuna tilmaamay inuu durba bilaabay isbaddallada lagu sameynayo ururka booliska isagoo dib u eegay Xeerka Booliska. .
Booliiska oo u jilba joogsaday qoorta laga shakisan yahay ayaa sababtay dhimasho.
Raiisel wasaaraha ayaa xaqiijiyay in xukuumadiisu ay sii wadi doonto inay dib u habayn ku samayso bilayska iyo qabyo tirka sharciga jirdil iyo in la waayo tuhmanayaasha, ka dib markii ay sare u kacday cabashada dadweynaha marka la eego kiiska Korneyl Thitisan Uttanapol.
Afar sarkaal oo booliis ah oo Thai ah, oo uu ku jiro Colonel Thitisan Uttanapol, ayaa hadda waxaa baaritaan ku haya Booliska Royal Thai ee Bangkok ka dib markii fiidiyow laga soo duubay askarta oo si qalad ah u dilay nin looga shakisan yahay daroogo isku day isku day ah oo ay kaga doonayeen 2 milyan oo baht, qiyaastii $ 60,000.
Sida laga soo xigtay Kittiwittayanan iyo Ku-xigeenka Af-hayeenka Booliska Qaranka Thailand Korneyl Kissana Phathanacharoen, askartu waxay su’aalo weydiinayeen tuhmanaha 24-jirka ah iyo haweeney la socotay oo ku saabsan dambiyada laga yaabo inay ka dhashaan daroogada iyo haysashada in ka badan 100,000 oo kiniin methamphetamine ah markii ay labada nin oggolaadeen inay bixiyaan 1 milyan oo baht lacag baad ah si loo sii daayo.
Khilaafka oo ka dhacay Nakhon Sawan, oo ah gobol ku yaal waqooyiga Bangkok, ayaa cirka isku sii shareeray markii Col. Thitisan Uttanapol uu madaxiisa ku riday bac caag ah si uu ugu cabsi geliyo inuu lacagta ku labanlaabo 2 milyan oo baht, isagoo si kadis ah u dilay. - dhammaantood waxaa lagu muujiyey fiidiyaha. Ka dib markii ay jilbaha u saareen qoorta laga shakisan yahay, boolisku waxay isku dayeen inay dib u soo nooleeyaan dhibbanaha iyagoo leh CPR si ay uga faa'iideystaan. Saraakiisha Thai ayaa tan iyo markii ay aqoonsadeen dhibanaha Jeerapong Thanapat.
Kornayl Thitisan Uttanapol, mid ka mid ah saraakiisha ku lugta leh dhacdada, ayaa aad looga yaqaanaa aagga, lagu naanayso “Jo Ferrari” sababtoo ah wuxuu urursaday baabuur isboorti oo qaali ah. Ururinta waxaa lagu xantaa inay ku jirto Lamborghini daabacaad kooban Aventador LP 720-4 50th Anniversary Special, oo ka mid ah 100 ka mid ah oo laga soo saaray dunida oo dhan.
Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu leeyahay nidaamka cadaaladu waa inuu ahaadaa mid adag, oo ah tiirka maamulka qaranka, isagoo hubinaya in askarta booliiska ee ku xadgudba sharciga ay la kulmi doonaan ciqaab.
Raiisel wasaaraha ayaa ku amray Booliiska Royal Thai inay dardar geliyaan toddobo dib -u -habayn oo muhiim ah, oo ay ku jiraan kala sarraynta, baaritaannada iyo nidaamyada fulinta sharciga, hufnaanta xisaabinta iyo daryeelka booliiska.
Labadii sharci ee qabyada ahaa ee lagu soo qaaday kiiska hadda jira, RW ayaa sheegay in si joogto ah horay loogu sii riixayay sanadihii la soo dhaafay oo ay hadda sugayaan in lagu daro ajandaha Baarlamaanka. Afhayeenka Golaha Chuan Leekpai ayaa sheegay 26 -kii bishii Ogosto in labada arrimood lagu soo daray ajandaha si looga doodo.
Qodobbada ugu muhiimsan ayaa ah tallaabooyin ciqaab ah oo loogu talagalay jirdilka iyo baaba'a tuhmanayaasha, tallaabooyinka ka -hortagga iyo dib -u -bixinta dhibbanayaasha iyo hababka dacwad -ku -oogayaasha dembiilayaasha.
Midda labaad ee labada qabyo ah waa Xeerka Booliska Qaranka, oo akhrintiisa labaad sugaya. Guddoomiyaha Garabka Dawladda Wirat Rattanaset, oo madax u ah guddiga dib -u -eegista qabyada, ayaa maanta sharraxay in qodob kasta oo qabyo -qoraalka ahi uu keenay dib -u -eegis, taasoo gaabisay hawsha. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in haddii jidhku dardar geliyo dib -u -eegistiisa, ay hawsha ku dhammayn karto wax ka yar hal sano.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 33